ती दिनहरूमा म कसैगरी पनि एउटा जागिरमा झुन्डिनैपर्ने दबाबमा थिएँ । खासगरी यसले केही गर्ने भएन भनेर कचकच गरिरहने बा को मुखमा बूजो लगाउन । 'फलाना र ढिस्कानाका छोराहरूले आफ्नै बलबुताले काठमाडौंमा जागिर खाएर कहाँ-कहाँ पुगिसके', बा गलाको नसा फुलाउनुहुन्थ्यो । हामी दिमागमा प्रेसर फुलाउँथ्यौं । त्यही भएर पूर्वी नेपालबाट राजधानी हान्निएर क्याम्पस शिक्षाबाट उकालो चढ्दै गर्दा जागिरमा अल्झिनुपर्ने ध्याउन्न थियो ।
पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशक एकै व्यक्ति थिए । खल्तीमा जागिर बोकेर हिंड्ने हैसियत राख्ने । उनीहरूका लागि तल्ला तहका कर्मचारी त झन् खल्तीका कलमजस्तै हुने भइगए । मन लागेको बेला बाटोबाटै टिपेर भिरिहाल्छन्, नलागेको बेला फुत्त निकाल्छन् । सिस्टम, तौरतरिका ओठ र आँखामा अँडेको हुन्छ । बोल्यो कि नियम, हेर्‍यो कि आदेश !
मैले पनि एक भेटबाटै जागिर पाएको थिएँ । बिस्तारै तलब बढाउने गुलियो आश्वासन पनि मिलेकै थियो । बढी तलबको मिश्री पाउने-नपाउने ठेगान नभए पनि म कमिला भएर काममा जुटेको थिएँ । कामको लहरा अफिसदेखि झ्याङ्गिँदै गएर मेरो डेरासम्म पुग्थ्यो । अफिसमा नसकिएको काम कोठामा लगेर गर्थेँ । अन्तर्वार्ता अडियोबाट सुन्दैकागजमा उतार्दा मध्यरात कट्थ्यो । कुनै कुराकानीलाई लेखको स्वरूपमा ढाल्नुपर्ने,कुनैलाई अन्तर्वार्ताकै रूपमा उतार्नुपर्ने ।
अन्तर्वार्ता लिने र रेकर्ड गर्ने मान्छे अर्कै हुन्थ्यो । त्यसलाई लिखित रूपमा उतार्न म फेला पर्थेँ । अरुले लिएको अन्तर्वार्तामा कुनै बेला प्रश्न त कुनै बेला जवाफ राम्ररी नुसुनिए/नबुझिएपछि कनेर दोहोर्‍र्‍याई-तेहेर्‍र्‍याई सुन्दासुन्दै दिमाग तनावले लोथ हुन्थ्यो । हरेक हप्ताको यो सिलसिलाले टाउकोको मगज भुत्ते खुकुरी राख्ने म्यानमा परिणत भइरहेको अनुभूति हुँदै थियो । कहिलेकाहीं लाग्थ्यो, जिन्दगी भन्नु जागिर त रैछ । जिन्दगी चलाउन जागिर खाइन्छ कि जागिर खान जिन्दगी चलाइन्छ, एकरत्ति भेद नभए जस्तो । र पनि जिन्दगीको पाठशालामा संघर्षलाई साथी नबनाए फेल खाइन्छ भनेर डुङ्गा खियाउँदै बढिरहेथेँ ।
आदर्शमा ओठ तौलनेहरूले भन्छन्, 'आफ्नो रुचिअनुसारको पेसा अपनायो भने त्यो बोझ हैन, रमाइलो कर्म बन्छ ।' तर, अनेक उल्झनमा र नानाभाँतीका मान्छेहरूको माझमा काम गर्दा रुचिको पेसाले कुनै पनि बेला स्वाद गुमाउन सक्छ । त्यतिबेला आदर्शको कुरा भद्दा व्यावहारिक पाटो बनिदिन्छ । कर्मचारीहरूबीचमै अलिक सिनियरले जुनियरसामु मैं हुँ मालिक झैं गरी देखाउने धमासले युवा उत्साह धूलिसात् हुनु स्वाभाविकै हो ।
तर, मालिक त मालिक नै हो । कुनै कुरामा चित्त नबुझे पनि ऊ सामु प्रतिवादमा केही बोल्न हत्तपत्त शब्द फुट्दैन । 'पत्रकारिता गरेर खाँदैनौ' भनेर ओठ लेप्य्राउने मालिकसामु म पनि त्यो दिन नाजवाफ थिएँ । सायद मेरा ओठ-तालु नै सुकेका थिए । तर, मनले चाहिं एकोहोरो भनिरहेथ्यो - पर्ख ! म गरेर, खाएर देखाउँछु ।
सामुन्नेको मानिसको मौनतामा हरेक घमण्ड थप भुक्दै जान्छ । पत्रकारितामा मेरो अशुभ भविष्यवाणी गरिदिएका मालिक पनि मेरो थप चिना-टिपन केलाउँदै थिए । जीवन गुजाराको कुरा पैसामा जोडियो ।
'पैसा कमाउन त तरकारी बेच्नुपर्छ भैया । बढी पैसा त्यसमा छ ।' उनले यो अर्ती पनि बोनसस्वरूप दिए ।
मेरो इमान र परिश्रमको पसलमा तत्कालै लहलह काउली र साग टुसाएर फले । तर,ती काउली र सागमा स्याउँस्याउँती कीरा परेका थिए ।
हामीकहाँ हरेक पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्ताले प्रेरणा, ऊर्जा र हौसलाको अपेक्षा राख्दैन । जसरी कि, नयाँ पुस्ताबाट पुरानाले सामान्यतया सम्मान र इज्जतको आशा राख्दैन । त्यस्तो प्राप्तिको ठाउँ नै रहन्न । सायद नयाँ पुस्तालाई हौसला र स्नेह नदिने अहम्को भूत सवार भएकोले पुरानालाई सम्मान नसुहाएको होला । अथवा, यथेष्ट सम्मान भाग नलगाएकोले पुरानाहरूले नयाँमा ऊर्जा सञ्चार नगरेका होलान् ! यसबारे यही नै हो भनेर नापनक्सा केलाउन मुश्किल छ । गुदी भरेर यो खाडल पुर्न कसले सुरु गर्नुपर्ला ? सायद समानान्तर र परिपूरक व्यवहार नै दुवै पुस्तालाई फाइदा गराउने पुल हो । तर, यथार्थमा एउटालाई अर्को पुस्ता वृद्ध र बेकामे ट्याक्टर लाग्छ, जसले गतिको तुलनामा बढी हल्ला मात्र गर्छ । अर्कोतिर, अनुभवले पाकेको आँखासामु भर्खरको पुस्ता हिजोको चल्ला देखिन्छ, जसको कुनै कुरामा पनि ढंग र अदब छँदै छैन !
नेपालका धेरै पत्रकारमा ग्यास्टि्रक रोगको सानोतिनो घर छ । न खाना-खाजाको ठेगान, न त सुत्ने समयको पालना । दुवै आँखाको छेउमा पर्दा लगाएर सीधा बुर्कुसी मारिरहेको रेसको घोडा जस्तो दैनिकी । खल्तीमा परेको प्वालबाट घरको सामानकोलिस्ट हराएर देशको अर्थतन्त्रबारे बहस छेडिरहेको बबुरो बुद्धिजीवी ।
जागिरमा लागेको सुरुवाती दिनहरूमा मेरो हालत त झन् खल्तीमा प्वाल परेको हैन,बिना खल्तीकै कमिजको जस्तो थियो । अफिसबाट खाजा खान साथीहरू निस्किनलाग्दा सकेसम्म टार्ने गर्थेँ । तर, पैसा नभएको बेला त झन् भोककै यादमा पेट देवदास भएर हायलकायल पार्थ्यो ! अलिक पछिको समयमा तारेको तोफु (भटमासको दूधबाट बनाइएको परिकार) मा बढीभन्दा बढी मन लगाइयो । किनकि त्यो सस्तोमा पाइन्थ्यो । मीठो पनि लाग्थ्यो । सस्तो भएकोले पनि त्यसमा थप मिठास थपिएको हुँदो हो ।
फिचर रिपोर्टका लागि राजधानी सहरको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म पैदल दगुर्थेँ । कुकुरका सौखिनहरूका लागि केनल क्लबको सेवादेखि जुत्ता र क्यामेराको बजारमा डिजाइन र ब्रान्डको घनचक्करसम्ममा दिमाग पौडी खेल्थ्यो । मान्छेहरू जुत्ताको समाचार लेखेर बकस स्वरूप जुत्ता नै पाएर उन्थे । पुरानो जुत्ताले नै साथ दिइरहनु मेरो लागि भाग्य थियो । परिश्रमको कमाइले सुक्खा तोफु टोक्दा पेट राम्ररी नरमाए पनि मन भने मजासित भरिन्थ्यो ।
तिनताक प्रेममा थिएँ म । कहिले साप्ताहिक बिदाको दिन आउला र मायालुसँग एक झप्को भेटमा हप्ताभरिको थकान बिर्सिन पाउँला भनेर व्यग्र पर्खाइमा बस्थेँ । हरेक सोमबारे छुट्टीमा स्वतन्त्रता दिवस र प्रेम दिवस एकै दिन पथ्र्यो । एक घन्टाको बाटो धाएर जाँदा देउतै भेटेजस्तो तृप्ति मिल्ने !
तीन-चार हजारको जागिर खाँदा पनि उसको मोबाइल फोनमा पैसा हाल्दिन खै कताबाट जङ चल्थ्यो । उसले छिटफुट लेख्ने लेख/कविताको म अघोषित सम्पादक नै थिएँ । शीर्षकदेखि विषयवस्तु र बुनाइमा तेल-पालिस घस्न पाउँदा आफ्नै सिर्जनामा लीन भइरहे झैं खुसी मिल्थ्यो । कवितामा ऊ भावना लेख्थी, लेखहरूमा महिला सशक्तिकरण र आत्मनिर्भरताबारे वैचारिक पाटो केलाउँथी । जे लेख्थी, मन छुन्थी । उसले कोरेका अक्षरमा म आफ्नै आवाज चिर्बिराएको पाउथेँ ।
प्रेमीको साइनोसँगै जीवनमा उसले मलाई सम्पादकको रूपमा नियुक्त गरेकी थिई, मैले भने मनमनै उसलाई सिन्दूर हालिसकेको थिएँ । एउटै काठमाडौं खाल्डोभित्र म नक्सालमा बस्थें, ऊ बस्थी सानेपा । एउटै घरको दुई बार्दलीको बीचमा पुल नभए जस्तो मात्र थियो । एक्लोपनले खाइरहेको मेरो जीवनमा उसले परिवारको ठाउँ लिंदै थिई । ऊ पनि कम गम्भीर थिइन ।
भन्थी - 'तिमी पैसा यस्सै के-के मा खर्च गरेर सक्छौ । मलाई देऊ । म राख्दिन्छु बैंकमा । पछिका लागि साँच्नुपर्छ ।'
उसको यस्तो सपना र योजनाको चुल्ठोमा पिङ खेल्दै म परसम्म बत्तिन्थेँ र हुरुक्क हुन्थेँ । बचत गर्न पुग्ने पैसा हुने त्यस्तो जागिर नै कहाँ थियो र आफ्नो ! तर, उसको सपनामा युगल पखेटा थपिदिन तोफु खाने ३०-४० रुपैयाँ पनि जोगाएर राखूँ जस्तो हुन्थ्यो ।
पर मोडमा आउँदै गर्दा अदृश्य औंलाहरूले मुटुमा काउकुती लाउने सामर्थ्य राख्थी ऊ । उसले मुटुमा लगाइदिएको काउकुती सर्दैसर्दै अनुहारमा मुस्कान भएर भरिन्थ्यो । तर,मेरो त्यस्तो मुस्कानलाई जागिरले टोक्दै गइरहेको थियो । आर्थिक पत्रकारिताको अंकगणित र जोर कि बिजोर हिसाबमा मेरो जीवनको ज्यामिति खुल्न सकिरहेकोथिएन । खुसीको सीधा रेखा त्रिकोणमा फन्को मार्दै, रिंगटा छुटाउँदै जिल्लिरहेको थियो। मन निस्ताउँदै थियो । दिमाग थाक्दै थियो ।
पत्रिकामा मैले तयार पार्ने स्तम्भ कहिले आउँथ्यो, कहिले पूरै हापिएर जान्थ्यो । काम लगाउनुअघि कुनै सुझाव नदिने तर तयार पारेर बुझाइसकेपछि यो भएन र त्यो भएन भन्दै गुनासोको चाङ लगाउने क्रम बढेपछि मन दिक्किँदै पनि थियो । त्यसमाथि नयाँ आएका दाइ पत्रकार बलजफ्ती सम्मान पाउन आफ्नो वरिष्ठता प्रदर्शन गरिरहेथे । उनले बडप्पन देखाएपछि ममा भने उल्टो असर पर्दै थियो । उनी आफ्नो शैली लाद्न खोज्थे, म हरेक मान्छेको आफ्नो शैली हुन्छ भन्थेँ ।
एकदिन मालिकले फेरि बोलाए ।
भने - 'तिम्रो काम पनि खस्किंदै गयो । तिम्रो तलब अबदेखि चार हजार रुपैयाँ मात्र । फेरि राम्रो हुँदै गयो भने बढाउँला ।'
पहिलो जागिरमा संघर्ष गरिरहेको युवा पहिलो पटकमै असफल हुँदै थियो ।
जागिरमा बढुवा हुन्छ भन्नेबारे काका, मामा र दाइ-दिदीहरूबाट सुनेको थिएँ धेरै । आफैंले स्वाद चाखेपछि भने घटुवा पनि हुँदो रैछ भनेर पहिचो चोटि थाहा भयो । तलब घटेको परमादेश मालिकबाट सुनिरहँदा प्रेमिकाले 'भविष्यका लागि पैसासाँच्नुपर्छ' भनेको कुरा कानमा झङ्कृत भयो । अब झन् बचत गर्ने पैसा फुकी-फुकीखोज्नुपर्ने दिन आयो ।
आवेगमा तातो निर्णय सुनाएँ मालिकलाई - 'जागिरबाट अब हात धुन्छु । सुक्खा हात नै बस्छु ।'
जागिर छोड्ने निर्णय लिइरहँदा आफैंभित्र डराइरहेको थिएँ, बेरोजगार प्रेमीबारे प्रेमिकाले के धारणा बनाउली भनेर । जागिर छोडेको पीडाभन्दा उसले निरुपाय र कमजोर रूपमा हेर्ली भनेर असुरक्षित महसुस गर्दै थिएँ । कमाइबाट प्राप्त हुने आत्मबल कस्तो चिज हो, त्यो दिन बुझ्दै थिएँ ।
त्यो रात अडियो अन्तर्वार्ता कागजमा उतार्न अनिदो बस्नु परेन । जागिर खाने कसरी भनेर मनभित्रैको आफ्नै वार्ताले हल्ला मच्चाइरह्यो ।
बत्ती निभ्यो । मध्यरातपछि पनि आँखा निभेन ।
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, October 21, 2015